Manchester by the Sea (2016) – Burmese Subtitle
IMDB: 7.8/10 198,645 votes
Andrea Ulrich, Kenneth Lonergan, Michael J. Moore
Won2Oscars. Another 117 wins & 243 nominations.
ဒီရုပ်ရှင်ဟာ oscar ၂ဆု(best actor,best screenplay)အပါအ၀င်
အခြားဆုတွေများစွာကို သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကောင်းတစ်ခုပါ ကျနော်တို့ဒီကားမှာ မင်းသား Casey Affleckရဲ့ အေးတိအေးဆက် အမူအရာတွေ နဲ့ ခပ်ဆွေးဆွေး အသံကို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် …
Lee Chandler ဟာ ခန့်မှန်းရခက်တယ် သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကို ထုတ်ပြဖို့ကိုဝန်လေးတဲ့ ခပ်အေးအေးလူတစ်ယောက်ပေါ့ ဒါပေမဲ့ မိသားစု ဆွေမျိုးတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းနေသူပါ သူ့ဘ၀ကြီးဇောက်ထိုးမိုးမျှော် မဖြစ်ခင်အထိပေါ့
လူတွေက သူ့ကိုအသည်းမာတယ်လို့ထင်ကြတယ် ဒါပေမဲ့ သူ့ခံစားချက်တေမြိုသိပ်ထားတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလေ
အခုလေးတင် စကားပြောတာပုံမာန်လူတစ်ယောက်လို ခဏနေတော့ ရုတ်တရက်ကြီး ရဲဆီက သေနတ်လု Sucideလုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူ… မြိုသိပ်ရတာများလာတော့ ပေါက်ကွဲထွက်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့ ..
ဘ၀မှာ တစ်ချို့အရာတွေကို ဆုံးရှုံးရတတ်တယ် ဆုံးရှုံးမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာတော့ နောက်ထပ်ဆုံးရှုံးရမှာကို ထိတ်လန့်လာတယ် ပြီးတော့….
Lee Chandlerဟာ အရာအားလုံးကို ဆုံးရှုံးခဲ့တယ် ပိုင်ဆိုင်ဖို့ကိုတောင်
သူဟာ ရှင်သန်နေပေမဲ့ သူ့ ဘ၀ကတော့ သေသွားခဲ့ပြီလေ….
ဒီဇာတ်ကားမှာ Leeဟာ Bostonမြို့က လူ့ဂွစာ တောက်တိုမယ်ရအလုပ်သမား အနေနဲ့ အစပျိုးထားတယ် သူစွန့်ခွာခဲ့တဲ့ Manchesterမြို့ကို ပြန်ဖို့ အကြောင်းသင့်လာတယ် ပြီးတော့မှ ပြန်မြင်ယောင်လာတဲ့ အနေနဲ့ရိုက်ထားတဲ့အတွက် ဇာတ်ကားက non linearမျိုးပါ မျက်စိလည်တတ်လို့
ပြီးတော့ ဇာတ်အိမ်ကလည်း အေးတဲ့အတွက် entertainmentအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေဘူး Lee Chandlerနေရာမှာ ကိုယ်တိုင်ဝင်ခံစားရင်တော့ ဒီကားဟာတော်တော်လေ ရင်ထဲညိတဲ့ ဇာတ်ကားပါ
File Size – 2.19 GB
Running Time – 2h 17min
Translator – Aung Khant Khine
Andrea Ulrich Kenneth Lonergan Michael J. Moore
Option 1 Drive.google.com 2.19 GB 1080p
Option2Megaup.net 2.19 GB 1080p
Option3Mega.nz 2.19 GB 1080p
Option4Mediafire.com 2.19 GB 1080p
Option5Nofile.io 2.19 GB 1080p
Option6Filescdn.net 2.19 GB 1080p
Option7Sendit.cloud 2.19 GB 1080p
Option 8 Tusfiles.com 2.19 GB 1080p
Option9Uptobox.com 2.19 GB 1080p
Option 10 Userscloud.com 2.19 GB 1080p
Real Steel (2011) 2011
Malena (2000) 2000
Mary Queen of Scots (2018) 2018
Inhuman Kiss (2019) 2019
The Dam Busters (1955) 1955
Rules of Engagement (2000) 2000
Replicas (2018) 2018